မိုးကောင်းကင်: April 2010
သားအဖနှစ်ဦး လမ်းထွက်လျောက်ကြရင်း ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်ရှေ့တွင်
နောက်ဆုံးပေါ် ကားတစ်စီး ရပ်ထား သည်ကို တွေ့လိုက်သည်။
သား...."ဒီလို ကားမျိုး စီးတဲ့ လူက ဗိုက်ထဲမှာ အသိပညာမရှိတဲ့ လူပဲဖြစ်ရမယ်"
ဖခင်...."ဒီလို စကားပြောတဲ့ လူက အိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ လူပဲဖြစ်ရမယ်"
အရာဝတ္ထု တစ်ခုပေါ် ကြည့်တဲ့ ကိုယ့်အမြင်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ် သဘောထား
အမှန်ကို ဖော်ပြ နေပြီလား...
ညနေစာ စားပြီးနောက် အမေနှင့်သမီးဖြစ်သူက နောက်ဖေးတွင် ပန်းကန်များကို
ဆေးကြောနေခဲ့ပြီး သားအဖနှစ်ဦးက ဧည့်ခန်းတွင် တီဗွီထိုင်ကြည့်နေသည်။
ရုတ်တရက် နောက်ဖေးမှ ပန်းကန်ကျကွဲသံကို ကြားလိုက်ရပြီး ခဏမျှ
ဖခင်....."သားက ဘယ်လိုလုပ် သိလဲ"
သား.... "ဆဲသံ မကြားလို့ ဖေဖေ"
တချို့လူတွေက မတူညီတဲ့ စံထားနဲ့ ကြည့်တဲ့ အမြင်တွေ ကွဲပြား တတ်ကြတယ်။
တစ်ခြားလူ လုပ်ရင် အပြစ် ရှိတယ်.... ကိုယ်လုပ် ရင်တော့ အပြစ်မရှိဘူး။
တစ်ခါက ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကျွန်းတစ်ကျွန်းသို့ ခရီးသည်များ သွားရောက်
လည်ပတ်ကြသည်။ ထိုကျွန်းရှိ လမ်းများမှာ အလွန်ဆိုးပြီး
ချိုင့်ခွက်များဖြင့် မညီမညာဖြစ်နေသည်။ လမ်းပြတစ်ဦးက ခရီးသည်များကို
လမ်းမှာ ကျောက်ပေါက်နေသူနှင့် တူသည်ဟု ပြောဆို တောင်းပန်ခဲ့သည်။
အခြားလမ်းပြ တစ်ဦးကမူ " ကျွန်တော်တို့ အခုလျောက်နေတဲ့ လမ်းကတော့
ဒီနယ်တစ်ဝိုက်မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ပါးချိုင့်လမ်းလေးပေါ့" ဟု ကဗျာဆန်ဆန်
တူညီတဲ့ အဖြစ်အပျက်မှာ မတူညီတဲ့ အမြင်ကြောင့် ကွဲပြားတဲ့ ရလဒ်ကို
ခံစားကြရတယ်။ အတွေး ဆိုတာ ထူးဆန်းတဲ့ အရာတစ်မျိုးပါ။ ကိုယ်ဘယ်လို တွေးရင်
ဘယ်လို ခံစားရပါတယ်။ အကောင်း တွေးရင် စိတ်ချမ်းသာရပြီး အဆိုးတွေးရင်
အပေါ်က ပုံပြင်နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်မှာ ၃တန်းကျောင်းသား
ကလေးများကို ဆရာမက ကိုယ့်ဆန္ဒ ဟုသော စာစီစာကုံး တစ်ပုဒ်ကို
ရေးခိုင်းခဲ့သည်။ ကျောင်းသား တစ်ယောက်က သူ၏ဆန္ဒမှာ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်ဟု ရေးထားသည်။ ထိုအဖြေကို အရှေ့တိုင်းရှိ ဆရာမက
"ဒီကျောင်းသားဟာ ကြီးပွားမယ့်လူ မဟုတ်ဘူး"
သို့သော် အနောက်တိုင်းရှိ ဆရာမ တစ်ဦးက "ဒီကျောင်းသားဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို
အပြုံးတွေ ဖြန့်မယ့် သူဖြစ်တယ်"
တချို့လူတွေက အားပေးမှုကို လိုလားသော်လည်း အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ်ကို အကျယ် မဖွင့်ဆိုချင်ကြဘူး။
သူတောင်းစား " ၁၀ ကျပ်လောက် စွန့်ခဲ့ပါခင်ဗျာ"
လမ်းလျောက်သူ " ငါးကျပ်ပဲ ပါတယ်ခင်ဗျာ"
သူတောင်းစား " ငါးကျပ်ကို အကြွေးမှတ်ထားလိုက်မယ်"
တချို့လူတွေက ရတာနဲ့တင် မရောင့်ရဲတတ်ကြဘဲ လောဘစိတ်က ကျေးဇူးတင် စိတ်ကို
ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး ရှေးဟောင်းပြတိုက် တစ်ခုသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြသည်။
မိန်းမဖြစ်သူက ယောက်ျားအား " အော်...တစ်လမ်းလုံး ငေးလာလို့ လမ်းလျောက်တာ
တချို့လူတွေက ဘ၀လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ပြေးနေဖို့ပဲ သိပြီး လမ်းဘေး ၀ဲယာက
လှပတဲ့ အရာတွေကို ခဏလောက်ရပ်ပြီး ခံစားဖို့ မေ့နေတတ်ကြတယ်။
မိန်းမဖြစ်သူက မီးဖိုချောင်ထဲတွင် ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်နေသည်။
ယောက်ျားဖြစ်သူက ဘေးမှနေ၍ မိန်းမဖြစ်သူအား "
ဖြေးဖြေးလုပ်...ဆားထည့်ဦး... ဆီများသွားပြီ... မီးပြင်းပြန်ပြီ..ငါးကို
...ဟာ...အိုး စောင်းသွားပြီ" စသည်ဖြင့်
"မောင်ထက် ရှင်မက ဟင်းချက်ပိုတော်ပါတယ်... မောင် ကားမောင်းနေတဲ့
အချိန်မှာ ရှင်မလည်း မောင့်ဘေး ကနေ အဲလို တတွတ်တွတ် ရွတ်နေလို့
သူ့နေရာမှာ ၀င်ခံစားကြည့်မယ်။ သူ့ရှု့ထောင့်ကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင်
တစ်ခြားလူကို ကိုယ်ချင်းစာ တတ်ဖို့ ဆိုတာ မခက်ပါဘူး။
အလင်းစေတန် ရဲ့ ဖော်ဝါ့မေးကနေမှ တဆင့် ရောက်လာတဲ့ ဘ၀ရဲ့ ဒဿနလေးတွေပါ...
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 10:09 PM3comments Links to this post
Chemistry ဆရာမက အရက် ၏ဆိုးကျိုးများကို လက်တွေ့ ပြသပီးဆုံးမရန် အကြံရသည်။
ထို့ကြောင့် ဆရာမက ရေ တစ်တစ်ခွက် ဝီစကီ ခွက် ကို အတန်းရှေ့တွင် ချထားလိုက်သည်။
ထို့နောက် ဆရာမက ပိုးကောင် ၂ ကောင် ကိုယူလာပီး တစ်ကောင်ကိုရေထဲထဲ့လိုက်သည်။
ပိုးကောင်လေးက ရေထဲတွင် ပျော်ရွှင်စွာကူးခတ်နေသည် ။
ဆရာမကနောက်ပိုးကောင် လေးကို ဝီစကီခွက်ထဲ ထဲ့လိုက်သည်။
ပိုးကောင်လေး ချက်ချင်းသေသွားသည်။ ထို့နောက်ဆရာမက ကျောင်းသားများကိုကြည့်ပီး..
“ကဲ.. ကလေးတို့ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘာသင်ခန်းစာ ရသလဲ “
နောက်ဆုံးတန်းတွင်ထိုင်နေသော ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ဝမ်:သာအားရထဖြေသည်။
“ဝီစကီကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲကို ပိုးမွှား တွေ
မဝင်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ဆရာမ..”
သင်္ချာပညာရှင်တစ်ယောက် ရာဇဝတ် မှုတစ်ခုနှင့်် အဖမ်းခံရပြီး သေဒဏ်ပေးခံ ရသည်။
သေဒဏ်ပေးခါနီးတွင် သေဒဏ်ပေးမည့် စစ်သားက ပြောသည်
“ခင်ဗျား နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဆေးလိပ်လေး တစ်လိပ်လောက်မသောက်ချင်ဘူးလား”
“ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တို့ သေနတ် နဲ့ပစ်မသတ်ခင် .. ခင်ဗျားရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒ
“ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ… ခင်ဗျားရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုဖြည့် ဆည်းပေးဖို့
ကျွန်တော်တို့မှာ တာဝန် ရှိပါတယ်”
ထိုအခါ သင်္ချာပညာရှင်က …….
“ကောင်းပီ… ဒါဆို .. ကျွန်နော်နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ဘီယာ ခွက် ၁သန်း
ကလေးတစ်ယောက် စတိုးဆိုင်လာပြီး အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးဂွမ်းထုပ်ဝယ်တယ်။
တာဝန်ခံ- ကလေး ရဲ့  အမေ အတွက်လား။
တာဝန်ခံ-သြော် ဒါဆို ကလေးရဲ့  အစ်မအတွက်ပေါ့။
တာဝန်ခံ-ဟင် ဒါဆို ဘယ်သူ့အတွက်လည်း။
ကလေး–ညီလေးအတွက်ပါ။ တီဗွီမှာကြော်ငြာတယ် ဒါကိုသုံးထားရင်
စက်ဘီးလည်းစီးနိုင်ပါတယ်၊ ရေလည်းကူးနိုင်ပါတယ်၊ ဒါလေးနဲ့ဆိုလုံခြုံမှုရှိတယ်
ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် ယောင်္ကျား လေး တစ်ယောက် ကိုယ်တုံးလုံး ဖြင်. နေပူစာ လှုံ
နေစဉ် သူ.ဆီကောင်မလေး တစ်ယောက် ဦးတည်၍ လျှောက်လာပါတယ်။ ဒါနဲ. သူကလဲ ရှက်တာနဲ.
သူ.ပစ္စည်း ကို သူဖတ်နေတဲ. သတင်းစာ နဲ.အုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ကောင်မလေး – ရှင်.သတင်းစာ အောက်မှာ ဘာရှိလဲဟင်။
ကောင်လေး – ငှက်တကောင်ရှိတယ်။
အဲဒီနောက် ကောင်မလေး ကထွက်ပြေးသွားပြီး ကောင်လေး က အိပ်ပျော်သွားခဲ.တယ်။
ဒါနဲ. ကောင်လေး ကနိုးလာတော. နာကျင်စွာဖြင်. သူဆေးရုံရောက်နေမှန်းသိတော.တယ်။
ဒီတော. သူ.ကို ဆေးရုံခေါ်လာတဲ. ရဲက မေးပါတယ် ။
ရဲ – မင်းဘာဖြစ်လာတာလဲ။
ကောင်လေး – မသိဘူး၊ ကျွန်တော် ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ လဲလျှောင်းနေတုန်း ကောင်မလေး
တယောက် က ကျွန်တော. ပစ္စည်းအကြောင်းလာမေးတယ်။ အဲ.နောက်မမှတ်မိတော.ဘူး။
အဲဒီတော. ရဲ က ပင်လယ်ကမ်းခြေ ရှိ ထိုကောင်မလေး ကို သွားရောက်မေးမြန်းပါတော.တယ်။
ရဲ – နင် ဟို ကိုယ်တုံးလုံးနဲ.ကောင်လေး ကို ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ။
ကောင်မလေး – အော်သူ.ကိုလား။ ဘာမလုပ်ပါဘူး။ ကျွန်မ က ငှက်ကလေးနဲ.ဆော.နေတုန်း
ငှက်က ကျွန်မကို တံတွေးနဲ. ထွေးတယ်လေ။ ဒါနဲ.ကျွန်မလဲ စိတ်တိုပြီး
ငှက်ရဲ.လည်ပင်းကို ချိုးပစ်တယ်၊ ငှက်ဥ ကို ခွဲပစ်လိုက်ပြီး အသိုက်ကိုပါ မီးရိူ.
ဘ၀မှာ မောပန်းနွမ်းနွယ်မှုကလေးများကို … ဒီဟာသလေးတွေ ဖတ်ပြီး စိတ်ပင်ပန်းမှုလေးများ ပြေပျောက်စေရန်အတွက် ဖော်ဝါ့မေးမှ.. ရသော ဟာသလေးများကို ပြန်လည် မျှဝေခံစားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဟာသဆိုတာ ဘယ်အချိန်ဖတ်ဖတ်… အမောပြေပျောက်မှုကိုရရှိစေပါတယ်..။ ဒါကြောင့် အရင်တစ်ခါ ဖတ်ဖူးပြီးသားဆိုရင်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အတွက် နောက်တစ်ကြိမ် စိတ်ပေါ့ပါးမှုလေးများ ရရှိသွားနိုင်စေရန်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်… ။ ဘ၀ အမောလေး များပြေပျောက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း………… ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:48 PM0comments Links to this post
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ Microsoft Outlook Express အသုံးပြုနည်း စာအုပ်လေးပါ။ အင်တာနက်ကနေ အီးမေးတွေ ပေါင်းစုံ ကို သုံးနေကြတဲ့ အခါမှာ အားလုံးသောမေးများဟာ ပုံစံတူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေ စွာနဲ့ အသုံးနိုင်ကြသော်လည်းပဲ ရုံးတွေ အနေနဲ့ outlook ကို အသုံးပြုပြီး မေးပို့ ရမယ်လို့ ပြောတဲ့ အခါမှာ outlook ကိုမသုံးတက်တဲ့သူတွေက များပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါအ၀င်ပါ။ ကျွန်တော်လည်း outlook ကိုသုံးပြီး မေးပို့ ခိုင်းရင် မပို့တက်ပါဘူး။ အရင်က အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေမွှေနှောက်ရင်းနဲ့ outlook အသုံးပြုနည်း အီးဘုတ်လေးကို ရထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအီးဘုတ်လေးကိုဖတ်ပြီး တော့ မေးပို့ မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေစွာနဲ့ ပဲ ပို့ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံးလည်း လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ဒေါင်းလုပ်ယူ နိုင်အောင်လို့ အခုလို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ဖြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေ စွာနဲ့ မေးပို့ နိုင်ကြပါစေနော်….။ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ဆိုဒ်ကတော့ 0.24 MB ပဲ ရှိတာပါ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:20 PM4comments Links to this post
ပိန်လှီကာကြီးထွားလာတယ့်။
တွက်ချက်လုပ်ဆောင်ကြသင့်တယ့်။
ဥယျာဉ်မှုးတို့ရဲ့တာဝန်ပင့်။
ရေးသားသူ - ဇာနည်မောင်
သူငယ်ချင်း ကိုဇာနည်မောင် ပို့ ပေးထားတဲ့ ကဗျာ လေး ပါ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 6:00 PM 1 comments Links to this post
၁၃၇၁ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးသွားပြီ ဖြစ်လို့ ၁၃၇၂ နှစ်သို့ ဒီနေ့ စတင်ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မင်္ဂလာရှိသော မြန်မာ နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မှစ၍ မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သား အပေါင်း ၊ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား အပေါင်းအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း နှင့် ပြည့်စုံကြ၍ စီးပွား ဥစ္စာ လာတ်လာဘများ တိုးပွားကြ၍ ဘေးရန်ကင်းကွာစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါ စေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်………။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:58 AM 1 comments Links to this post
သင်္ကြန်ရက်အတွင်း ဘလော့မှာ ပို့စ် တင်ခြင်း ရပ်နားထားအုံးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် သင်္ကြန်ရက်လေးတွေကိုလည်း စာဆိုတော် ဦးကြော့ရဲ့ ``ပိတောက်ပန်း`` ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးနဲ့ ကြိုဆိုခဲ့လိုက်ကြရအောင်ဗျာ................ ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 10:06 PM0comments Links to this post
နှစ်စဉ်အမြဲသတိရနေတယ့်။
အပျော်ကြီးပျော်ခဲ့ အဲ့ဒီသင်္ကြန်ရက့်။
အဲ့ဒီနှစ်သစ်ကူးတဲ့ သင်္ကြန်ပွဲ့။
အမိမြေကိုလွမ်းစိတ်ကပိုကဲ့။
သင်းပျံတဲ့ပိတောက်တွေကိုလည်းလွန်းရမြဲ့။
မြန်မာပြည်ရဲ့ သင်္ကြန်ရက် တွေနဲ့ တော်တော်လေးဝေးကွာနေ တဲ့ နိုင်ငံ တကာသို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုဇာနည်မောင် ရဲ့ သင်္ကြန် အလွမ်းပြေလေး ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ အခုလို သင်္ကြန်အလွမ်းပြေလေးကို ရေးဖွဲ့ ပေးတဲ့ ကိုဇာနည်မောင် နှင့် တကွ သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံး လည်း နှစ်သစ်မှာ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာ ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..... ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 10:34 AM0comments Links to this post
အီးမေးလ်က ရတဲ့သင်္ကြန်သမိုင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် သင်္ကြန် သမိုင်း …. ယခုလို နှစ်သစ်ကူးတဲ့ အချိန်သမယမှာ မြန်မာတွေအနေနဲ့ မြန်မာ ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲတော်ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း အစကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ သင်္ကြန် မူလက သင်္ကြန်ပွဲတော်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကျင်းပခဲ့ ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဘာသာရေးပွဲတော် တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါက (ဗရာမာလို့ခေါ်တဲ့) ဗြဟ္မာမင်း အာစိ ဟာ ဒေ၀နတ်အပေါင်းတို့ရဲ့ ဘုရင် သကြားမင်းကို စစ်ရှုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သိကြားမင်းဟာ စစ်ရှုံး ခဲ့တဲ့ ဗြဟ္မာမင်း အာစိရဲ့ ဦးခေါင်းကို ဖြတ်ပြီး ဆင်တစ်ကောင်ရဲ့ဦးခေါင်းကို ဗြဟ္မာမင်းရဲ့ ခန္ဓကိုယ်မှာ ပြန်တပ်ပေးဖို့ သိကြားမင်းရဲ့ ညှိနှိုင်း မှုကို စစ်ရှုံးတဲ့ ဗြဟ္မာမင်းက သဘောတူခဲ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဆင်ဦးခေါင်းနဲ့ ဗြဟ္မာမင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါင်း စပ်တဲ့ ဟိန္ဒူဘုရား ဂနေဆာ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဗြဟ္မာမင်းဟာ အလွန်အင်မတန် တန်ခိုးကြီးလွန်းတဲ့အတွက် ပြတ်သွားတဲ့သူခေါင်းကို ပင်လယ်ထဲ မျှောမိရင် ပင်လယ်ရေတွေခန်းခြောက် သွားနိုင်ပါတယ်။ ပထ၀ီ မြေကြီးပေါ်တင်မယ်ဆိုယင်လည်း မြေကြီးဟာ အပိုင်းပိုင်းကွဲအက်ကြေမွသွားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်လို့များ မိုးကောင်းကင်ထဲ ကို ပစ်လိုက်မယ်ဆိုယင်လဲ မိုးကောင်းကင်တစ်ခုလုံး မီးတောက်လောင်ကြွမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုသိတဲ့ သိကြားမင်း က အဲဒီဗြဟ္မာကြီးရဲ့ခေါင်းကို အဲဒီလို မဖြစ်စေဖို့အတွက် နတ်သမီး တစ်ပါးစီကို တစ်နှစ်တစ်ခါ အလှည့်ကျစီိကိုင်ထားရမယ် ဆိုပြီး မိန့်တော်မူပါတယ်။ တစ်နှစ်ကုန်လို့ နောက်တစ် နှစ်ကို ကူးတဲ့အခါကျယင် အလှည့်ပြောင်းတဲ့ အချိန်ကို သင်္ကြန်ပွဲတော်ဆင်နွဲခဲ့ကြပါတယ်။
သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို တစ်ချိန်က ဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးခံခဲ့ရတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ အတော်များများမှာ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်အဖြစ်ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊လောနိုင်ငံ နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေမှာ ဆက်လက်ကျင်းပဆဲဖြစ်တာကိုတွေရပါတယ်။
သင်္ကြန်အကြိုနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးတွေ့ရှိချက်က ဥပေါသဓ မင်းကြီး ရဲ့ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရာက စတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဘုရင်များဟာ တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါ ဦးခေါင်းတော်ဆေးတဲ့ မင်္ဂလာကို ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာမင်းများစွာ ကလည်း အဲဒီအချိန်ရောက်ရင် ယခုမော်လမြိုင်မှာ ရှိတဲ့ မုတ္တမကွေ့က ခေါင်းဆေးကျွန်းမှာ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုကြပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ သိကြားမင်းဟာ နတ်ပြည်ကနေ လူ့ပြည်ကို ဆင်းသက် လာပါတယ်။ ဒီလိုဆင်းလာတဲ့အချိန်ကို သိစေဖို့ သင်္ကြန်အမြောက်ကို ဖေါက်ပါတယ် ။ အဲဒီအခါ လူတွေဟာ အတာအိုးထဲရေထည့်ကာ သပြေခက်နဲ့ မြေကြီးကို ရေဖြန်းလို့ ရှိခိုးပူဇော်ကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ဘုရင့် ဆရာများဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယကဇာတ်မြင့်မျိုးနွယ် ဗရာမန်ဇာတ်ဝင် ပုဏ္ဏားက နောင်လာမဲ့နှစ်အတွက် ဟောကိန်းဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန်စာကို ရွတ်ဖတ် ကြေငြာပါတော့တယ်။ ဒီဟောကိန်းကိုတော့ သိကြားမင်း ဘာ တိရစ္ဆာန်ကို စီးပြီး ဘာကိုင်လာသလဲဆိုတာကို အခြေခံပြီး ဟောတာဖြစ်ပါတယ်။ ခလေးတွေကို ဒီအချိန်မှာ လူကြီးတွေပြောလေ့ရှိတာက ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ အမည်စာရင်းကို သိကြားမင်းက ရွေပုရပိုက်မှာ ရေးမှတ်ပြီး ဆိုးသွမ်းသူတွေရဲ့ နံမယ်ကို ခွေးသားရေ ပုရပိုက်မှာ ရေးမှတ်တယ်လို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ သင်္ကြန်ဟာ ဟိန္ဒူ ၀ါဒ ယုံကြည်မှု ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ရပ်က ဆင်းသက်လာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရှေး ပညာရှင်က၀ိများက ဒါကို ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ အဆုံးအမများနဲ့ ပြုပြင်ယူခဲ့ကြပြီး နှစ်သစ်ကူးကစလို့ ရှင်ပြုခြင်းဓလေ့၊ ဘုရားကျောင်းကန်များမှာ ဥပုသ်သီလစောင့်ခြင်း ဓလေ့၊ လူကြီးသူမတွေကို ခေါင်းလျှော်ပေးခြင်း ခြေသည်း လက်သည်းညှပ်ပေးခြင်း၊ သတ္တ၀ါတွေကို ဘေးမဲ့လွှတ် ပေးခြင်းဓလေ့ တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့သင်္ကြန်ဟာ ယဉ်ကျေးမှုများ ပေါင်းစုံခြင်းရဲ့ အမှတ်သညာတစ်ခုပါ။ နိုင်ငံတကာရဲ့ အာရုံကို စွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ပွဲတော်ဆိုလဲမမှားပါဘူး။ ဒီလိုထူးခြားမှုတွေ အနှစ်သာရတွေနဲ့ ထုံမွှမ်းနေတဲ့ အချိန်အခါမှာ မြန်မာတွေ မေတ္တာတရား များပွားနိုင်ကြပြီး လူလူခြင်း နိုင်ထက်စီးနင်းပြုခြင်း ဘေးအန္တရာယ်မှ နောင်နှစ်များမှာ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ သတ္တ၀ါအပေါင်း ကျန်းမာကြပါစေ ချမ်းသာကြပါစေ ဘေးကင်းရန်ကွာကြပါစေ ရန်သူ မျိုးငါးပါးရန်မှ ကင်းဝေးကြပါစေ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့ နှစ်သစ်မှာ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
အပေါ်က ရေးထားတဲ့ သင်္ကြန်သမိုင်းကြောင်းလေးက တော့ ဒီက နေမှ ပြန်လည်မျှဝေခံစားပေးထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ တွေ ဟာ သင်္ကြန်လို့ ကြားလိုက်ကြတာ နဲ့ လူငယ်တွေ နဲ့ တချို့ လူကြီးတွေ ရဲ့ စိတ်တွေထဲမှာဆိုရင် အလိုလိုကို မြူးကြွ လာခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကြ တော့လည်း ဒီရက်တွေမှာ ဦးပဇင်း ၀တ်ဖို့ တို့ ၊ ရိပ်သာ ၀င်ဖို့ တို့သီတင်းသီလ ဆောက်တည်ဖို့ အတွက် သင်္ကြန်ရက် မတိုင်ခင် ကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ တချို့ လူငယ်တွေကတော့ တစ်နှစ်တစ်ခါ နှစ်သစ်ကူး တဲ့ သင်္ကြန် ရက်ကို မရောက်ခင်ကတည်းက သင်္ကြန် သီချင်းတွေ ကြားနေရချိန်မှာပဲ စိတ်ဓာတ်တွေက မြူးကြွလို့၊ တက်ကြွလို့ ။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ ငါတို့ ဘယ်လိုိုကဲလိုက်မယ်ဟေ့ ၊ ဘယ်လိုလည်လိုက်မယ် ဟေ့ ဆိုပြီး တွေးတော ကြံစည်နေကြတဲ့ လူငယ်ပေါင်းကလည်း မနည်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလို သင်္ကြန်ကို ဘာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတယ် ဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူ နည်းလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း သေချာ မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မသိသေးတဲ့ လူငယ်လူကြီးများနှင့် သူငယ်ချင်း တို့ အတွက် ဒီသင်္ကြန်သမိုင်းကြောင်း လေးကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာ လေးက တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရေးတာ လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ရေးသားသူကိုလည်း ဘယ်သူဆိုတာ မသိရှိရတဲ့ အတွက်ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီသင်္ကြန်သမိုင်းကြောင်းလေး ရေးသားသူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် လို့ ပြောကြားရင်း……… ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့သို့ လာရောက် လည်ပတ်ကြသော သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ များနှင့်တကွ ဘလော့ဂါ မောင်နှမများ အားလုံးလည်း… နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်….။
ပျော်ရွှင် သော အတာ သင်္ကြန်ပွဲတော်လေး ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း………….. ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 7:53 PM 1 comments Links to this post
တက်ချင်သည့် လူအတွက် “တက်လမ်း“ဆိုတာ ရှိစမြဲ ဖြစ်သည်။
ဘယ်ကိုတက်မည်လဲ။ သစ်ပင်ထိပ်ဖျားလား၊ တိုက်ခေါင်မိုးလား၊ ဟိုးကောင်းကင်လား။ တကယ် ဆန္ဒပြင်းပြလာပြီဆိုလျှင် ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ရင်းပင် မိုးကောင်းကင် တိမ်ယံကြား တက်သွားနိုင်ပါတယ်။
အလကားအခြောက်တိုက် လျှောက်ပြောနေသည်ထင်ပါလား။ မယုံမရှိနှင့်။
တကယ် တက်သွားဖူးသူ ရှိပါသည်။ သူ့နာမည်က လယ်ရီဝေါ်လတား(စ)။
ဝေါ်လတား(စ)သည် ထရပ်ကား မောင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အဲသည်တုန်းက သူ့အသက် ၃၃ နှစ်။ အားလပ်သည့် အချိန်တိုင်း အိမ်နောက်ဖေးကွက်လပ်တွင် ပက်လက်ကုလားထိုင်တစ်လုံးနှင့် ထိုင်ကာ လေမှာ ပျံဝဲလိုက်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာဟု တွေးသည်။ စင်စစ် သူက လူမှန်းသိစ အရွယ်ကတည်းကပင် ကောင်းကင်မှာ သိပ်ပျံချင်လှသူ ဖြစ်သည်။ ဟိုး အထက်ကြီး တက်သွား၊ အမြင့်ကြီးကနေ ဟိုးအဝေးကြီး လှမ်းကြည့်၊ သိပ်အရသာ ရှိမှာ၊ အဲသည်လို သူတွေးလေ့ရှိသည်။ သို့သော် စိတ်ကူးသာ ယဉ်နေရသည်။ လက်တွေ့ လုပ်ဖြစ်ဖို့ လမ်းစရှာမရ။
အကယ်၍ လေယာဉ်နှင့် ၀ဲပျံမည် ဆိုပါစို့။ လေယာဉ် ပိုင်းလော့ဖြစ်ဖို့ သူ့မှာ ပညာအခြေခံ မရှိ။ သင်တန်းတက်ဖို့ ငွေမရှိ၊ အချိန်မရှိ၊ အခွင့်ရေးမရှိ။ ဟင်းဂလိုက်ဒါ ( hang glider) ကျတော့လည်း အန္တရာယ် ကြီးလွန်းသည်။ ပြီး – သည်ဟာတွေ စီး၍ကောင်ားသည့် နေရာကလည်း အဝေးကြီးမှာ။ ထို့ကြောင့် သူ့ခမြာ နွေနေ့လယ်ခင်း များစွာကို ထိုင်ရင်းသာ ကုန်လွန်စေရသည်။ သူ့ကုလားထိုင်က ပန်းခြံထဲ နောက်ဖေး ကွက်လပ်များထဲမှာ သူသူငါငါ ချထားတက်သည့် အလျူမီနီယံ ဘောင်တပ်ကြိုးထိုး ကုလားထိုင်ဟောင်း တစ်လုံး ဖြစ်သည်။ အဲသည်လိုနေရင်းက တစ်နေ့မှာတော့ သတင်းစာတွေ၊ တီဗွီတွေထဲမှာ လယ်ရီဝေါ်လတား(စ) အကြောင်း ရုတ်တရက်ကြီး ပါလာသည်။ လော့စ်အိန်ဂျလိ(စ)မြို့ကြီး အထက်က ကောင်း ကင်ပြင်မှာ လယ်ရီကြီး ရောက်နေသည်။ တကယ် လေမှာ ပျံနေပြီ။ တကယ့်ကို ဟိုး အထက်ကြီးမှာ။ သူ့အလျူမီနီယံ ပက်လက် ကုလားထိုင် ဟောင်းကြီးမှာ ပင် ထိုင်လျက်။ သို့သော် သည်ကုလားမှာ ချိတ်ဆွဲထားသည်က သို့မဟုတ် သည်ကုလားထိုင်ကြီးကို မ,ချီထားသည်က ဟီလီယမ် ဓာတ်ငွေ့ ဖြည့်ထားသည့် မိုးလေ၀သ ပူဖောင်းအကြီးစား ၄၅ လုံး။
သူ့ကျောမှာ လေထီးတစ်ခု ပိုးထားသည်။ သူနှင့် အတူ အသံလွှင့် အသံဖမ်း(စီဘီ) ရေဒီယိုတစ်လုံး၊ ဘီယာ ခြောက်ဘူး၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့် အချို့အပြင် အောက်ဘက် ပြန်ဆင်းချင်သည့်အချိန်၌ ပူဖောင်းအချို့ကို ပစ်ဖောက်ရန် လေသေနတ်တစ်လက်ပါသည်။
လယ်ရီ လေထဲတက်သွားသည်က ပေတစ်ရာ နှစ်ရာ မဟုတ်၊ အမြင့်ပေ သောင်းတစ်ထောင်အထိ ဖြစ်သည်။ လော့စ်အိန်ဂျလိ(စ) အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်မည့် လေယာဉ်များ၏ ချဉ်းကပ်လမ်းကြောင်းထဲသို့ပင် သူ ရောက်သွားသည်။
လယ်ရီက စကားများများ ပြောလေ့ရှိသူ တစ်ဦးမဟုတ်။ စာနယ်ဇင်းသမားတွေက သူ ဘာကြောင့် ပူစီဖောင်းနှင့် ကောင်းကင်ပေါ်တက်ရသလဲ မေးသည့် အခါ “ ဒီအတိုင်းချည်း ငုတ်တုတ်ထိုင်မနေနိုင်ဘူးလေဗျာ“ ဟုတ်ဖြေသည်။ အပေါ်ရောက်တဲ့အခါ မကြောက်ဖူးလား ဆိုတော့ “ ကြောက်တာပေါ့ဗျ“ တဲ့။ နောက်တစ်ခါ တက်ဦးမလား မေးသည့်အခါ “ ဟင့်အင်း“ ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် အခုလို လုပ်လိုက်ရတော့ ခင်ဗျား တော်တော် ကျေနပ်သွားလား မေးသည့်အခါ သူက နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းတွေ နားရွက်တက်ချိတ်မတက် အားရပါးရကြီး ပြုံးကာ “အရမ်း ကျေနပ်တာပေါ့ဗျာ“ ဟူ၍ ဆိုလေသည်။
လူတွေ ကြည့်လိုက်လျှင် ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ကာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟု တွေးနေသူများ၏။ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေဖြစ်နေကြပေမယ့် ငါ့အတွက်တော့ မျှော်လင့်ချက် မရှိပါဘူးဟု စိတ်ဓာတ်ကျနေသူတွေ များ၏။ သည်အတိုင်း အပျက်ပဲ တွေးကာ ငုတ်တုတ်ထိုင် မှိုင်နေသရွေ့တော့ ဘာမှ ဖြစ်မလာနိုင်တာ အမှန်ပင်။
သို့သော် လယ်ရီဝေါ်လတား(စ)လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖို့တော့ လောကကြီးမှာ မဖြစ်နိုင်တာ ဘာမှ မရှိ။
လေမှာ ပျံဝဲချင်သလား။ တခြားနည်းနှင့် မဖြစ်နိုင်လျှင် ကုလားထိုင်မှာ ပူစီဖောင်းချည်သော နည်းနှင့် ဖြစ်ရမည်။ ပေသောင်း တစ်ထောင် ရောက်သည့် အခါ “ဟေး… ၊ ငါရောက်ပြီးကွ၊ ငါ လေထဲ ပျံနေပြီ“ ဟု အော်မည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကြားအောင် ရေဒီယိုနှင့် လှမ်းပြောမည်။
မှန်သည်။ လောကကြီးမှာ အပြီးသတ် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် အရာက စိတ်ဓာတ်ပဲ ဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလ ကြာချင် ကြာသွားမည်။ ပုံစံက အများထင်တာ၊ မျှော်လင့်တာနှင့် ကွာခြားကာ ဆန်းဆန်းပြားပြားတွေ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမည်။ သို့သော် အရေးကြီးသည်က ကောင်းကင်သို့ ရောက်ဖို့၊ ရင်ထဲ နှလုံးသားထဲက ဆန္ဒ ပြည့်ဝဖို့၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ပေါက်မြောက်အောင်မြင်ဖို့၊ ဒါပဲ ဖြစ်သည်။
ကုိုယ့်စိတ်ကူးကို မဖြစ်နိုင်ဘူးဟု မချုပ်ချယ်နှင့်။ သူများ စိတ်ကူးကိုလည်း အဓိပ္ပာယ်မရှိတာဟု မလှောင်ပြောင်နှင့်။
လူတွေ လေထဲ မပျံနိုင်ဘူးဟု ဆိုခဲ့သည်။ လေမှာ ပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြင့် ပျံသူတွေ ပျံပြခဲ့ကြပြီ။ “ဟေး တခြားကိရိယာ အကူအညီတွေနဲ့ ပျံတာပါကွ၊ ငှက်တွေလို သူ့ ခန္ဓာကိုယ် သက်သက်နဲ့ ပျံနိုင်သလား“ ဟု ဆိုသူတွေ ဆိုကြပါမည်။
စောင့်သာ ကြည့်ကြစမ်းပါ။ ဗီတာမင်ဆေးတွေ တီဗီမှာ ကြော်ငြာသည့် စွမ်းအား မြှင့် ဆေးရည် တွေ သောက်ကာ တစ်ယောက်ထည်း ကျိတ်ပြီး တောင်ပံ ခတ်ကျင့်နေသော ပုဂ္ဂိုတွေ မရှိဟု မပြောနိုင်။
တစ်နေ့သော အခါ သည်လူတွေ လေမှာ ပျံမပြဘူး ဟု ဘယ်သူမျှ မပြောနိုင်။
လောက မှာ လူတော်တော်များများ ဟာ ပက်လက် ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေကြပြီးတော့ တကယ်တမ်း လက်တွေ့ထလုပ် ရမှာ ကို မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဆိုပြီး ကြောက်နေကြသူတွေဟာ မရေတွက် နိုင်လောက်အောင် များပြားလှပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ ကိုယ်တိုင်က ဖြင့် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဆိုပြီး စွန့်စားရမှာ ကို ကြောက်နေတဲ့ အပြင် တခြားသူတွေက စွန့်စားလုပ်ကိုင်မယ် လို့ ပြောတဲ့ အခါမှာလည်း ရင်းနီးသော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ဆွေမျိုးသားချင်းများဆိုလျှင် “မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ။ မဖြစ်နိုင်တာ မလုပ်စမ်းပါနဲ့ ။ မရူးချင်စမ်းပါနဲ့ ။ ကိုယ့်ဖာသာ အေးအေးဆေးဆေးပဲ နေစမ်းပါ ၊ ထသွားမှ အကျိုးမှန်း လူသိနေပါအုံးမယ် “ဟု စသည်ဖြင့် ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ မရင်းနှီးသော သူများ ဆိုလျှင်တော့ “ အဲဒီကောင် ငပေါကြီး၊ အရူး မို့ လို့ ဒီလို လုပ်တာ။ စဉ်းစားဉာဏ် မရှိတဲ့ကောင် ၊ အလကားကောင် “ စသည်ဖြင့် သူတစ်ပါးကို ကဲ့ရဲ့ လှောင်ပြောင် တက်ကြတာ ကတော့ လူ့ သဘာဝ လို့ ပဲ ပြောရမလားပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီစာစုလေးတွေကို ဖတ်ပြီးတော့ လောက မှာ မဖြစ်နိုင်တာ ဟာ ဘာမှ မရှိပါဘူး ။ မဖြစ်သေးတာ ပဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သက်သေပြ နိုင်ဖို့ရန်အတွက် လယ်ရီဝေါ်လတား(စ) လို… ကိုယ် ဖြစ်ချင်နေသော စိတ်ကူး လေးများကို တကယ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင်၊ စိတ်ကူးယဉ် ရေစီးကြောင်းထဲ မှာ မျောပါမနေဘဲ အချိန်ရှိသရွေ့ ကြိုစား အားထုတ် နိုင်ကြ ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်း နဲ့ က မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဟိုဘက်က နည်းလမ်းနဲ့ ချဲ့ထွင်စဉ်းစားပြီး ၊ ရှု့တောင့် ပေါင်းစုံက နေ ဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုခု နဲ့ ကြိုးစား ပြုလုပ် နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟိုး … အရင်က ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ စကားပုံလေး ကို ပြန်ပြောပြရရင်……
“ကြိုးစား အားထုတ်နေသမျှ သင်မရှုံး။ လက်မြှောက်နောက်ဆုတ်သွားပြီဆိုလျှင်ကား…. သင်လုံးဝ ဆုံးရှုံးပေပြီ….။“
ဒီစကားပုံလေးကလည်း တကယ် စိတ်ဓာတ် ခွန်အားတွေ တိုးပွားစေတဲ့ စကားပုံလေးပါ။ ဒါကြောင့် စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းတို့တတွေလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဆိုပြီး တွေဝေ မနေပဲ တကယ်လက်တွေ့ ကြိုးစား လုပ်ဆောင် နိုင်ကြစေရန် အတွက် ဖေမြင့်၏ နှလုံးသား အာဟာရ (၂) စာအုပ်မှ စိတ်အားဆေး လေးများကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကိုတော့ ဖတ်ဖူးပြီးသားသူတွေတော့ တော်တော်များများ ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ဖူးသူများရော၊ မဖတ်ရသေးသောသူများပါ ပြန်လည် ဖတ်မိတဲ့ အခါမှာ စိတ်ဓာတ် ခွန်အားများ တိုးပွားပြီးတော့ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒ ပြုရင်း……………….
Robert Fulghum ၏ All I really Need to Know I Learned in Kindergarten စာအုပ်မှ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 7:11 PM0comments Links to this post
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 5:27 PM0comments Links to this post
ဒီစာ အုပ်လေးကတော့ ဟိုးအရင်တုန်းက ညီလေး ကိုဇင် ပို့ပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ဆရာ ဦးမျိုးသူရ ရေးသားထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ တပ်ဆင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်း အခြေခံသဘောတရားများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ဒီစာအုပ်လေး မှာ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံး မှာ ပါဝင်တဲ့ Hardware ပစ္စည်းတွေကို တစ်ခုခြင်း တပ်ဆင်အသုံးပြုပုံ နှင့်တကွ ထို Hardware ပစ္စည်းတွေ ရဲ့ အလုပ် လုပ်ဆောင်ပုံများ ကိုပါ ပုံတွေ နှင့် တကွ ရေးသား ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေး တစ်အုပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာ အကြောင်းကို လေ့လာနေသူတွေ အတွက်တော့ တကယ် အသုံးဝင်မယ့် စာအုပ်လေးပါ။
အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ် ယူနိုင်ပါပြီ။ ဆိုဒ်ကတော့ 15.2 MB ရှိပါတယ်။
Dwonload ( 4Shared download )
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 7:10 PM0comments Links to this post
မြတ်ဗုဒ္ဓမိန့်တော်မူသည်မှာ အချိန်တန်သောကာလ၌ ဤလောကဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ နောက်ထပ် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတစ်ပါးပွင့်တော်မူဦးမယ်။ ထိုမြတ်စွာဘုရားကလည်း သင်တို့အား ထာဝရသစ္စာတရားကို ငါဟောခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ဟော်တော်မူဦးမှာပဲ။ ထိုမြတ်စွာဘုရားသည်လည်း ငါကဲ့သို့ပင် ကျေးဇူးတော်အစုံ၊ ဂုဏ်တော် အနန္တနှင့် ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ သမ္မာသမ္ဗောဓိစစ်စစ်ဖြစ်တော်မူတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခုမျက်မှောက်ဘ၀မှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ လူတွေဟာ အရိမေတ္တေယျဘုရား ပွင့်တော်မူတဲ့အခါ သူတို့လည်း လူ့ဘ၀ကိုပြန်ရောက်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ကြတယ်။ အဲဒီအခါကျမှ ဂေါတ မဗုဒ္ဓလက်ထက်က ရခဲ့ကြတဲ့ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနှင့် ထပ်တူချမ်းသာမျိုးကိုလည်း ထိုဘုရားသာသနာမှာ သူတို့ရကြမယ်လို့ ယုံကြည့်မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ အဲဒီအခါကျပြန်တော့လည်း ထိုဗုဒ္ဓရဲ့ ဒေသနာတော်တွေဟာ နောင်အခါ ပွင့်မည့်ဘုရားကို မျှော်လင့်ချက်တွေဖြစ်နေဦးမှာပဲ။ သို့သော် ဘာသာရေးကိုကိုင်းရှိုင်းကြတဲ့ ဘယ်သူမျိုးမဆို ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် နိဗ္ဗာန်ဓာတ်၊ အငြိမ်းဓာတ်ကို ရနိုင်ကြတာသာဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ်၊ နိဗ္ဗာန်ကို ရချင်တဲ့ဇောစိတ်နဲ့ ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြရင် ဘယ်အချိန်မဆို နိဗ္ဗာန်ကို ရနိုင်တာချည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်းလွင်(ရှင်အာဒိစ္စရံသီ) “ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ကြတာက“
တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းက ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟာ ကိုရင်တစ်ပါးကို တောင်အောက်လွတ်ပြီး ဆီအဝယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ ကိုရင် ဆီမဝယ်ထွက်ခင် ဘုန်းကြီးက ဆီထည့်ဖို့ ခွက်တစ်လုံးပေးပြီး
” ကျောင်းမှာ အသုံးစရိတ် မလုံလောက်တဲ့အတွက် ဆီကို လုံးဝ မဖိတ်စင်အောင် ဂရုတစိုက် ထည့်ခဲ့ပါ ကိုရင်”
လို့ သတိပေး မှာကြားလိုက်တယ်။
ကိုရင်က တောင်အောက်ဆင်း ဆီဝယ်ပြီးနောက် တောင်ပေါ်ကို ပြန်လာလာခဲ့တယ်။ လမ်းမှာ ဘုန်းကြီးရဲ့ အမှာစကားကို ပြန်ကြားယောင်ပြီး လက်ထဲကဆီဖိတ်မှာ အရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဆီခွက်ကိုပဲ စိုက်ကြည့်ပြီး တောင်ပေါ်လမ်းအတိုင်း တက်လာခဲ့တယ်။ ဘေးဘီကိုလဲ မကြည့်ရဲခဲ့သလို ရှေ့ကလမ်းကိုလည်း မကြည့်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျောင်းရောက်ခါနီးမှာ ရှေ့ကိုမကြည့်ခဲ့တာကြောင့် ချိုင့်တစ်ခုကို နင်းမိပြီး ယိုင်လဲသွားခဲ့တယ်။ လက်ထဲကဆီ သုံးပုံတစ်ပုံလောက် ဖိတ်သွားခဲ့တယ်။ ဘုန်းကြီးဆူတော့မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကိုရင်ဟာ ကြောက်လန့်ပြီး လက်တွေတုန်လာခဲ့တယ်။ ဆီခွက်ကို အငြိမ်မကိုင်နိုင်ခဲ့လို့ ဆီခွက်ဟာ မီးဖိုချောင်အရောက်မှာ တစ်ဝက်သာကျန်ခဲ့တော့တယ်။
ဒါကို ဘုန်းကြီးကသိတော့ ကိုရင်ကို စိတ်ဆိုးပြီး
“သေချာယူခဲ့ပါလို့ မှာထားရက်နဲ့ ဖိတ်ဖြစ်အောင်ဖိတ်ခဲ့သေးတယ်”
ဆိုပြီး ဆူတော့ ကိုရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒီအဖြစ်ကို တစ်ခြားဘုန်းကြီးတစ်ပါးက သိတော့ ကိုရင်ကိုခေါ်ပြီး နှစ်သိမ့်လိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် ကိုရင်ကိုခေါ်ပြီး
“ကိုရင်ကို ဆီသွားဝယ်ခိုင်းအုန်းမယ်။ ဒီတစ်ခေါက်သွားရင် လမ်းပေါ်မှာ ကိုရင်တွေ့တဲ့ လူ၊ ပစ္စည်းမှန်သမျှ ဘုန်းကြီးကို ပြန်လျှောက်ရမယ်”
ဘုန်းကြီးစကားကို ကြားတော့ ကိုရင်က မသွားချင်ခဲ့ဘူး။ ပထမတစ်ခေါက်က ဆီခွက်ကို မဖိတ်အောင် မယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ဒီတစ်ခေါက်က ဘေးဝဲယာကို ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ ဒီအလုပ်ကို သူလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် မဖြစ်မနေ သူသွားခဲ့ရပြန်တယ်။
ဆီဝယ်ပြီး အပြန်လမ်းမှာ ကိုရင်က ဘေးဝဲယာကို ကြည့်ပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆော့ကစားနေကြတဲ့ ကလေးတွေ၊ တောတောင်ရဲ့အလှကို ခံစားရင်း၊ လယ်သမားတို့ရဲ့ လှေကားထစ် စိုက်ခင်းတွေကို ကြည့်ရှုရင်း စိတ်တွေက ပေါ့ပါးနေခဲ့တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အလှမှာ နစ်မျှောနေခဲ့လို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ သူရောက်လို့ရောက်လာမှန်း မသိခဲ့ဘူး။ မီးဖိုချောင်ရောက်တဲ့အထိ ခွက်ထဲက ဆီက တစ်စက်မှတောင် မဖိတ်ခဲ့ပါဘူး။
သတိထားလေ အမှားလုပ်မိလေပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင်ယူချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထားပြီး အတွေ့အကြုံအတွက် သင်ယူလေ့လာနိုင်ခဲ့ရင် အကောင်းဆုံးပါ။ အတွေ့အကြုံထဲကနေ ဘဝရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေတတ်သူတွေကမှ စိတ်ရဲ့ဖိစီးမှု၊ စိတ်ညစ်မှုတွေနဲ့ ကင်းဝေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဒီပုံပြင်က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပုံပြင်လေးထဲက ကိုရင်လေး လို အလုပ်တစ်ခု ကိုလုပ်တဲ့ အခါမှာ အဲဒီ အလုပ်ပေါ်မှာပဲ အာရုဏ်စူးစိုက်ပြီး စိတ်ကို ချုပ်တည်း မထားကြပဲ လွတ်လပ် ပေါ့ပါးစွာ နဲ့ လုပ်ကိုင်ပြီးတော့ ဘ၀ရဲ့ အောင်မြင်မှုလေးတွေ ရယူနိုင်ဖို့ ရန် အတွက် ဟိုး… အရင်အချိန်တွေက ဖော်ဝါ့မေးထဲ ရောက်လာတဲ့ နှစ်သက် သဘောကျတဲ့ စာစုလေး တွေ ကို သိမ်းဆည်း ထားရာက နေ စာဖတ်သူများ သို့ တဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါ။ မူရင်း စာရေးသူကို မသိတဲ့ အတွက် ထည့်မပေးနိုင်တာကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့။ သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံးလည်း ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စိတ်ကိုလွတ်လပ် ပေါ့ပါးစွာ အလုပ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း……. ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 6:37 PM0comments Links to this post
ဒီနေ့ ဧပရယ်တစ်ရက်နေ့ဟာ ဧပရယ်လ်ဖူးလ်နေ့ (April Fool’s Day ) သို့မဟုတ် အရူးများ နေ့ (All Fool’s Day ) လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ် ။ ဒီနေ့ (April Fool’s Day )ပေါ်ပေါက်လာပုံ အနေနဲ့ကတော့ 16 ရာစု နှစ် ၀န်းကျင် 1582 ခုနှစ်လောက်မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ကနေ အစပြုခဲ့တယ်လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ကိုသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြင့် သိပ်ပြီး တော့ တိကျမှု ရှိမယ်လို့ ပြောလို့ မရခဲ့ပါဘူး။ ပြင်သစ်တွေဟာ… အဲဒီအချိန် မ တိုင် ခင်မှာတော့ ဂျူလီ ယန် ပြက္ခဒိန် (Julian calendar ) လို့ခေါ်တဲ့ ပြက္ခဒိန်တစ်မျိုးကို သုံးစွဲကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပြင်သစ် နိုင်ငံရဲ့ န၀မ မြောက် ဘုရင် မင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့ ချားလ်စ် ( Charles IX ) မင်းမြတ်ဟာ သူတို့ရဲ့ ပြက္ခဒိန် (Gregorian Calandar) ဂရီဂိုရီယန် မှာ မတ်လ ၂၅ ရက်ကနေ ဧပရယ်လ် တစ်ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ် တိတိ ကျင်းပခဲ့တဲ့ (နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သီတင်းပတ် အဖြစ် ) နေ့ကို ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်နေ့ သို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ဒီလို နဲ့ပဲ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ နှစ်သစ်ဆိုတာ ကို ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်နေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ကာ အဲဒီ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်နေ့မှာပဲ ကျင်းပခဲ့ကြပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ပဲ သူတို့ ရဲ့ ပြက္ခဒိန်က ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ နှစ်သစ်ကူးရက်လို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း ပဲ မြို့ပြ နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ဝေး ကွာနေတဲ့ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ နေကြတဲ့ လယ်သမားတွေအနေနဲ့ အဲဒီသတင်းက မရောက်လာတော့ သူတို့ ရဲ့ နှစ်သစ်ကူး နေ့ ဟာ ဧပရယ်လ် ၁ ရက် နေ့မှာဆို ပြီး နှစ်ပေါင်း များစွာ ဆက်လက် ကျင်းပနေကြပါတယ်။ အဲဒီလို လ မှား ပြီး ကျင်းပနေကြတာကို မြို့ပြ ဒေသက လူတွေကသိသွားတော့ သူတို့ ကိုနောက် ပြောင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ပဲ သူတို့ ဆီကို အကြောင်ရိုက်ပြီးတော့ လက်ဆောင်တွေ ပို့ ပေးတာ တို့ ပါတီပွဲသို့လာရောက်ကြဖို့အတွက် နောက်ပြောင်ပြီးဖိတ် လိုက်တာ တို့ လုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်လိုက်တာကို ကျေးလက်နေ လယ်သမားတွေက တကယ် အထင်မှတ်ပြီး ရောက်လာကြတဲ့ အခါမှာ မြို့ပြနေ ပြည်သူတွေက ဟား တိုက် ရယ်မောပြီးတော့ သူတို့ ကို အရူးလုပ်လိုက်ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က စလို့ ဧပရယ်လ် တစ်ရက်နေ့ ဟာ ဧပရယ်လ် ဖူးလ် နေ့ ဆိုပြီး သူတို့ ရဲ့ အလေ့ အထ တွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့ရဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ဧပရယ်လ်ဖူးလ် အလုပ်ခံရတဲ့လူတွေကို ဧပရယ်လ် ငါး (“poisson d’avril” or “April fish” )လို့ခေါ်ကြတယ် သတဲ့။ သူတို့ ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ Poisson ဆိုတာကို ငါးကိုခေါ်ပါတယ်။ Avril ကတော့ ဧပရယ် လပါ။ အဲဒီလို ပဲ ဧပရယ်လ် ငါး လုပ်ကြတာတွေ ကို ပြင်သစ်မှာ တော့ ကလေးအများစုက ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါသတဲ့။ ပြီးတော့ အဲဒီ ငါးရုပ် ပုံလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ နောက်ကျောမှာ သူတို့ မသိအောင် လိုက်ကပ်ကြတာမျိုး လုပ် ပြီးတော့ အဲဒီလို အကပ်ခံလိုက်ရတဲ့ သူကို အရူးလုပ်ခံရတဲ့လူလို့ သတ်မှတ်ပြီး တော့ အော်ကြီး ဟစ် ကျယ် ရယ် ပြီး နောက်ပြောင် ကြပါသတဲ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ ဧပရယ်လ် ဖူးလ် နေ့ဟာ ပျော်ရွှင်စရာ နေ့လေးတစ်နေ့ ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့။
အဲဒီလို ဧပရယ်လ် ၁ ရက်နေ့ ကို ဧပရယ်လ်ဖူးလ် နေ့ အဖြစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ကနေ စတင် ကျင်းပလာခဲ့ ရာမှာ ၁၈ ရာစု နှစ် ပိုင်းသို့ ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ ဗြိတိန် တို့ စကော့တလန်တို့ သို့ ပျံ့နှံ့ လာပြီးတော့ သူတို့ ဆီမှာလည်း ဧပရယ်လ် ဖူးလ် နေ့ အဖြစ် ကျင်းပလာခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ အမေရိက တို့ အပြင် ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်ရှိ နိုင်ငံ အသီးသီး သို့ ပျံနှံ့ လာခဲ့ ပြီးတော့ ဒီနေ့ ဒီ ရက်မှာ အားလပ်ရက် ( Holiday) အဖြစ်သတ်မှတ်ကြကာ… ပျော်ရွှင်ဖို့ရာ အတွက် ဟာသတစ်ခု အနေနဲ့ ကျင်းပပြုလလုပ်လာခဲ့ ကြပါတယ်။ အဲဒီက စလို့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အတူတူပါပဲ။ ဧပရယ်လ် တစ်ရက်နေ့မှာ ဧပရယ်လ် ဖူးလ် နေ့ အဖြစ် မသိကြ သော ၊ သိထားသော်လည်းပဲ အမှတ်မထင် နေမိကြသော သူများအနေဖြင့် ဧပရယ်လ်ဖူးလ် လုပ်ခြင်း ကို ခံလိုက်ကြရပါကြောင်း ဧပရယ်လ် ဖူးလ်နေ့ အကြောင်း အမှတ်တရ ရေးဖွဲ့ လိုက်ရပါတယ်….
အောက်ပါ လင့်မှ အဆင်ပြေသလို ပြန်လည် ရေးဖွဲ့ ထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ….
သူငယ်ချင်း အားလုံး လည်း ပျော်ရွှင်သော ဧပရယ်လ် ဖူးလ် နေ့ လေး ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒ ပြု ရင်း ….
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 1:48 PM0comments Links to this post